Batsira hutano hwevanhu vese uye chengetedza kuchengetedzwa kwechikafu, uye ubatsire nzanga.
Parizvino, zvigadzirwa zvekambani zvikuru zvirongwa zvekuongorora ophthalmic uye kuchengetedzwa kwechikafu / zvekurapa POCT zvigadzirwa zvekukurumidza kuona, zviri zvigadzirwa zvekunze zvekuyedza kana mapuratifomu ane epasi rese anotungamira uye epamoyo matekinoroji. Shanghai chuangkun zvipenyu, sezvo mukuru mumiririri muChina, ndiye anokonzera nzwisisika kusimudzira, budiriro, rokutengesa uye pashure-okutengesa basa Chinese musika. Chiratidzo chekambani ndechekuzivisa tekinoroji yekunze inotungamira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye mapuratifomu, kusimudzira nekuwedzera kusimudzira, kubatanidza musika wakakura weChina, kunyatso shandira pamwe nenzira dzakasiyana siyana, vamiririri uye vatengi vekupedzisira, kuzadzisa win-win mushandirapamwe uye kutsvaga budiriro yakajairika, kuti yepamusoro-kumagumo kuyedza zvigadzirwa uye tekinoroji chikuva inogona kuiswa uye kutamba chinzvimbo chekuongorora musika weChina.
Makambani makuru emakambani anoshandira pamwe aya mayunivhesiti uye ekutsvagisa kwesainzi, echitatu-bato rekuongorora zvekurapa, IVD mamorekuru ekuongorora mabhizinesi, mabhizinesi ezvekudya, matunhu uye matunhu emakanzuru ekudzivirira chirwere, kutarisirwa kwemusika uye manejimendi, kupinda-kubuda kwekuongorora uye Quarantine Bureau, nezvimwe. Shanghai chuangkun biology yakazvipira kuita iyo nyowani mamorekuru ekuongorora tekinoroji kubatsira hutano hwevanhu vese, kuve nechokwadi chekuchengetedza chikafu uye kubatsira veruzhinji.
Kuzvipira mukushandisa kweiyo nyowani mamorekuru ekuongorora tekinoroji kuve nechokwadi chekuchengetedza chikafu, kubatsira hutano hwevanhu vese, kugadzira ruzhinji!